ပဲခူး-ရန်ကုန် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အသားတိုး ကြက်သားပေါက်များ တင်ဆောင်လာသည့် ယာဉ်တစ်စီး လမ်းလယ? - Yangon Media Group
လှည်းကူး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် အောင်မင်္ဂ လာအရှေ့ရပ်ကွက် ဘောလုံးကွင်းအနီး ပဲခူး-ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီခွဲခန့်က အသားတိုးကြက်သားပေါက်များ တင်ဆောင်လာသည့် ယာဉ်တစ်စီးလမ်းလယ်ကျွန်းအား ဝင်တိုက်မိခဲ့ရာမှ ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှုဖြစ်ပွားကာ လူသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပဲခူး-ရန်ကုန်ကား လမ်းမ ကြီးအတိုင်း ပဲခူးဘက်မှ ရန်ကုန်ဘက်သို့ အသားတိုးကြက်သားပေါက်များတင် ဆောင်၍ ယာဉ်မောင်း ဇော်ဝင်းထွန်း အသက် (၃၃)နှစ် ကံသာယာလမ်း စော်ဘွားကြီးကုန်း အင်းစိန်မြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်သည့် ယာဉ်အမှတ် 7L/……CANDA အဖြူရောင်ယာဉ်သည် လမ်းလယ်ကျွန်း အမှတ်(၁၂၇)အရောက်တွင် အဆိုပါလမ်းလယ်ကျွန်းဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်မိကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ယာဉ် ပေါ်ပါသူနှစ်ဦးမှာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူလေးဦးအနက်နှစ်ဦးကို မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ တင်ပို့ပေးခဲ့ရပြီး ကျန်နှစ်ဦးကို လှည်းကူး ဆေးရုံသို့တင်ပို့ပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
”သေတဲ့လူတွေနဲ့ ဒဏ်ရာရသူ တွေရဲ့ နာမည်၊ အသက်နဲ့နေရပ်လိပ်စာတွေကို တော့ မသိရသေးပါဘူး။ စိစစ်နေတုန်းပါ။ ယာဉ်ပေါ်မှာ လူရှစ်ဦးပါပြီး နှစ်ဦးက အခင်းဖြစ်နေရာမှာသေပြီး လေးဦးက မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက် နှစ်ဦးကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး”ဟု လှည်းကူးမြို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူသေဆုံး ဒဏ်ရာရအောင် ယာဉ်အားမဆင်မခြင် မောင်းနှင်သူ ယာဉ်မောင်း ဇော်ဝင်းထွန်းကို လှည်းကူးမြို့မယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းမှ ယာဉ်(ပ)၁ဝဝ/၂ဝ၁၇ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ ၃ဝ၄-က /၃၃၈/၃၃၇/ ၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးတွင် သုံးမြွှာမွေးဖွား ဦးခေါင်း တစ်လုံးဖြင့် ရင်ချင်းဆက် ?
JICA မှ ဂျပန်ယန်း ၁၄ ဘီလီယံကျော် ချေးငွေရယူပြီး SME လုပ်ငန်းရှင်များကို ထပ်မံထုတ်ချေးမည်
ရိုက်တာ သတင်းဌာနမှ ဖမ်းဆီးခံ သတင်းသမားနှစ်ဦး အရေး သတင်းမီဒီယာကောင်စီက Expert Witness ကျွမ်းကျင်သူ